Thursday April 09, 2020 - 19:09:28 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaal sarsare oo katirsan dowladda Sacuudiga ayuu haleelay cudurka dilaaga ah ee Covid19 sida ay xaqiijiyeen xubno katirsan qoyska talada haya.
Wargeyska New York Times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in 150 kamid ah xubnaha qoyska Aala Sacuud ee talada haya ay laxanuunsanayaan Carona islamarkaana lakaraantiilay Boqor Salmaan iyo dhaxal suge Max'med Bin Salmaan.
Mas'uuliyiinta uu asiibay Carona waxaa kamid ah amiirka mandiqadda Riyaad ee Sacuudiha iyo xubno kale, Amiir Cabdi Raxmaan Bin Saacid Bin C/caziiz oo kamid ah qoyska talada haya ayaa bartiisa Twitterka ku xaqiijiyay in 150 kamid ah qoyska Aala Sacuud ay Covid19 la xanuunsanayaan.
"warka ah in dadka Carona qaba ee Sacuudiyaanka ah ay gaareen 3000 oo ruux waa sax waxaana kamid ah 150 qoys oo Aala Sacuud katirsan Alla ha caafiyo bukaanada wadankeyga" ayuu yiri C/raxmaan Bin Cabdul Caziiz.
Sidoo kale Fahad Bin Muscab Bin Sacuud oo kamid ah ragga sida aadka ah ugu dhow Max'med Bin Salmaan ayaa isna xaqiijiyay warka sheegaya in xubno kamid ah qoyska talada haya ay Carona laxanuunsanayaan "Amiirku waa insaan oo dadka caadi ah ayuu lamid yahay waa xanuunsan karaa waana caafimaadi karaa" sidaas waxaa yiri Amiir Sacuudiyaan ah.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Max'med Bin Salmaan lagu karaantiilayo jaziirad ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyo, cudurka Carona ayaa horay ugu dhacay mas'uuliyiin reergalbeed ah iyo kuwa Afrikaan ah.